Blog - Toban talo oo ay tahay inaad ogaato - BILAASHA EYELASH been ah
Toban talo oo ay tahay inaad ogaato - Bilowgayaasha Eeylisha beenta ah
Karbaash mink ah oo tayo sare leh oo gacanta lagu sameeyo: 100% dhogor dhab ah oo dhab ah oo ah gebi ahaanba wax soo saar naxariis darro ah. Dhererka jeedalkeena taxanaha ah ee JM-LSH-S waa 0.8-15mm
Faashad jilicsan oo cudbi ah: Kooxda suufka jilicsan ee aadka u jilicsan ayaa dhererkeedu yahay 28-30mm oo ah 3D baarkooda dhabta ah ee mink ayaa u jilicsan indhaha iyo indhaha.
Dib loo isticmaali karo & Cadeyn karo: Felvik 3D lakabyo badan oo dabiici ah oo baalal dabiici ah ayaa la gashan karaa 20-25 jeer ama ka badan haddii si habboon loo maareeyo.
Lakabyo badan iyo Dabiici: Dhogorta adag ee dhumucda leh iyo xariiqda dhuuban ee khafiifka ah waxay ka dhigayaan jeedalku inay u muuqdaan kuwo riwaayado ah oo qalafsan, si kastaba ha noqotee culeys kuma saaraan baalasha indhaha.
Noocyo badan: Waxaa jira daraasiin noocyo kala duwan ah oo Felvik JM-LSH-S Series ah oo loogu talagalay xulashada macaamiisha. Oo waxaad dooran kartaa midkoodna inuu u xirxiro sidaad doonaysay.
AmnigaDhammaan agabyada uu Felvik isticmaalay si adag ayaa loo xushay oo ammaan ah. Warshada Felvik waxay samaysay kumanaan tijaabooyin ah si loo hubiyo in wax soo saarkeenu uusan wax dhibaato ah u lahayn indhaha iyo maqaarka.
Ogeysiis Fadlan: Maaddaama alaabtu yihiin 100% Handmade, dufcad kasta waxay noqon doontaa farqi, oo ay ku jiraan qaabka, dhererka, curling, qaro iwm
Q. 1: Ma heli karaa xoogaa tijaabo ah oo baarkooda?
J: Haa, amarka muunadda ayaa loo heli karaa hubinta tayada iyo imtixaanka suuqa. Laakiin waa inaad bixisaa qiimaha saamiga iyo qiimaha dhoofinta. Markaad gadaal gadaal wax ka iibsato, waanu soo celin doonaa qiimaha saamiga.
Q. 2: Miyaad siisaa baakadaha khaaska ah oo aad aqbashaa OEM?
J: Haa.Waxaan kuu samayn karnaa xirmooyin adiga kuu gaar ah.Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad soo dirto astaanta, waxaanan sameyn doonnaa naqshadeynta, xaqiijineynaa, daabacan doonnaa una adeegsan doonnaa amarrada baarkooda.
Q. 3: Ma jiraan MOQ oo loogu talagalay baarkooda?
J: Maya MOQ oo loogu talagalay amarka muunadda. Markii aan abaabulno amar ballaaran, waxaan ku siin doonaa taageero gaar ah amar kasta.
S. 4: Imisa jeer ayaa baarkooda la isticmaali karaa?
J: 20-25 jeer hab habboon oo dabacsan.
Q. 5: Sidee ku heli kartaa dhogorta mink? Ma Bilaa Arxan Daran?
J: Waxaa la ururiyaa markay minksku dhacaan timahooda sanad walba. Sidaas awgeed dhammaan dhogorteenna mink waa mid aan naxariis lahayn.
Waqtiga boostada: Jan-08-2021